Apple namoaka OS X 10.11.4 | Avy amin'ny mac aho
Ny teny fototra nankalazain'i Apple ora roa lasa izay, dia nitondra ny iPhone SE vaovao, ny iPad Pro 9,7-inch vaovao ary ny tadin'ny nylon ho an'ny Apple Watch. Ny lehibe tsy eo amin'ity famoahana ity dia ny Macbook ary ny fanavaozana nandrasana hatry ny ela ny maodely 12-inch izay natolotr'i Apple amin'izao fotoana izao. Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia efa nampahafantarinay anao tamin'ny an-tsipiriany momba ny vaovao fa ny iPhone SE sy ny iPad 9,7-inch dia nitondra anay, ary koa ny tadin'ny nylon ho an'ny Apple Watch.
Saingy tao amin'ny lahateny fototra, Tim Cook dia nifantoka tamin'ny fanambarana ihany koa fa amin'ity tolakandro ity, raha vantany vao vita ny keynote, efa navoaka tamin'ny kinova farany, mamela ireo beta izay niaraka taminay tato anatin'ny volana vitsivitsy. Amin'ny lafiny iray dia hitantsika ny kinova farany an'ny iOS 9.3 izay mitondra fampiasa vaovao marobe ho antsika, ny watchOS 2.2 izay mifantoka amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny fitaovana, ny tvOS 9.2 izay mitondra antsika ireo lahatahiry tena tiana sy tadiavin'ny mpampiasa maro ary ny Mazava ho azy, OS X 10.11.4.
Ny vaovao fa nandritra ireo volana maromaro dia nandramana tamin'ny betas samihafa natombok'i Apple ho an'ny OS X izahay tena vitsy dia vitsy izy ireo raha oharina amin'ireo rafitra miasa hafa izay ahitantsika vaovao maro hafa, toy ny amin'ny iOS 9.3 sy tvOS 9.2. OS X 10.11.4 dia mamela antsika hizara Live Photos avy amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra OS X, ilay fiasa vaovao izay nentin'ny iOS 9 niaraka tamin'ny iPhone 6s sy 6s Plus.
Zava-baovao iray hafa hitantsika amin'ity kinova OS X vaovao ity ny mety ho afaka hiaro ny hafa amin'ny fampidirana tenimiafina, fisehoana nolovaina tamin'ny iOS 9.3, izay ahafahan'izy ireo arovana ihany koa noho ny fanavaozana farany ary rehefa mifandrindra amin'ny fitaovana rehetra dia tsy maintsy misy amin'ny safidy roa io safidy io. Farany, hitantsika ny mandrindra PDF amin'ny iBooks, safidy iray takian'ireo mpampiasa mandritra ny fotoana maharitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X El Capitan » Apple dia namoaka ny OS X 10.11.4
ionfrehley (@ionfrehley) dia hoy izy:
Taorian'ny fanavaozana ny Bluetooth dia nijanona tsy niasa, ary na ny keyboard na ny trackpad na ny totozy dia tsy maintsy nifandray tamin'ny alàlan'ny tselatra mba hampandeha azy ireo. Fanavaozana ity, tsikaritro fa somary misimisy kokoa ny solosaina, tsy mahatsiaro tena be loatra izy io.
Valiny ionfrehley (@ionfrehley)
Hafahafa ve raha miresaka momba ny Bluetooth ianao, voavaha ihany ve izany amin'ny farany?
Jesus Gomez dia hoy izy:
Toy izany koa no nanjo ahy tamin'ny Bluetooth.
Mamaly an'i Jesús Gómez
Namboariko ny olana. Notsidihiko teto ity sary fanavaozana ity: https://support.apple.com/kb/DL1869?locale=en_US ary nametraka azy io indray aho. Taorian'ny famerenana dia niasa indray ny zava-drehetra. Mirary ny soa indrindra.